Ngasechibini, iJacuzzi kunye nesauna. - I-Airbnb
Ngasechibini, iJacuzzi kunye nesauna.
Igumbi lokuhlambela elimangalisayo eline-sauna yokuphumla kunye ne-jacuzzi. Ithafa elikhulu elinefanitshala yangaphandle kunye nephenyane lokubhexa lingasetyenziselwa uhambo oluhle lokuloba. Kukho igadi enkulu phakathi kwechibi kunye nendlu.
Kufuphi neenkonzo kunye neevenkile eMullsjö ebusika yindawo yokutyibiliza ekhephini enamathambeka asibhozo. Indlu ikwi-100 yeemitha ukusuka kwimizila ye-ski / umkhondo wokubaleka. IMullsjö idume ngendalo yayo entle.
Nceda undwendwele i-Jönköping ikwindawo entle enombono omangalisayo phezu kwechibi. Ikwakufuphi neGränna kunye neVisingsö. Uhambo losuku oluya eLiseberg, kumyezo wezilwanyana waseBorås, eSkara Summerland okanye eHigh Chaparral nalo ludumile kwiindwendwe zethu.
Iintsuku eziyi-7 e Mullsjo
4.71 · Izimvo eziyi-80
Kuhle ngenene apha.